ဆရာဦးကိုနီ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ကြံခံရတော့မှာလား? - News @ M-Media
ဆရာဦးကိုနီ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ကြံခံရတော့မှာလား?
in သူ့အမြင် — January 31, 2017
ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၊ ၂၀၁၇
မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူ သတင်းစာဆရာ ဘာတီးလ် လစ်တနာရဲ့အဆို –
“ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရတာဟာ ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ဆက်နွယ်နေတာကြောင့်ဆိုလို့ဆိုကြတယ်။ ဒါက တကယ့်ကို အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့အဆိုပဲ။ ဦးကိုနီက မွတ်စလင်တစ်ဦး၊ မြန်မာမွတ်စလင်တစ်ဦးလို့ ဆိုတာ ပိုမှန်မယ်။ သူ့ကိုကျွန်တော်သိတာ နှစ်တော်တော်ကြာပြီ။ သူက သူ့သာသနာနဲ့သူရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကို ဘယ်တုန်းကမှ ဒွေးရောယှက်တင်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဒီမိုကရေစီနည်းမကျတဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအပေါ်မှာသာ သူအဓိက စိုးရိမ်စိတ်ထားခဲ့တယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ သူ့သာသနာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောလေ့ပြောထမရှိဘူး။ သူ့အတွက်တော့ သူ့ယုံကြည်မှုနဲ့သူပဲ၊ ဒါထက်ဘာမှ မပိုဘူး။ ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့သူလုပ်ကြံခံရတဲ့အရေးကို ဘယ်သူမှ ဆက်စပ်ဆင်ခြေပေးနုိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ဒီလိုဆင်ခြေမျိုးက အဓိပ္ပါယ်လုံးဝမရှိတဲ့ဆင်ခြေပဲ။ သူ့လူမျိုး ကိုယ့်တုိုင်းပြည်ကို ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအပေါ် မှန်သထက်မှန်အောင် ရောက်စေဖို့ ဆန္ဒရှိသူကို မြင့်မားတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသူလို့ဆုိုရမယ်။ သူက ပရောဖက်ရှင်နယ် ဆန်လွန်းသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။” (http://www.irrawaddy.com/in-person/bertil-lintner-recalls-slain-nld-lawyer.html)
ဒေါက်တာ မလစ်ဆာ ခရောက်ခ်ျ ၊ နယူးဆောက်ဝေးလ်ယူနီဗာစီတီရဲ့အဆို –
“ဦးကိုနီဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ရေးကို တားဆီးထားတဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၉ (စ)ကို ပါလီမန်က ဖျက်သိမ်းနိုင်ဖို့ အတွေးအမြင်ကို ချပြခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ၁၉ ၄၇ ခုနှစ်က ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းပြီးတဲ့အချိန် ၁၉ ၅၀ ပြည့်လွန်ကာလတွေမှာ ဦးကိုနီက (ဦးနေ၀င်အစိုးရ) ပြဌာန်းမယ့် အခြေခံဥပဒေရဲ့ အရင်းအမြစ်ပြဿနာတွေကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လေ့လာသဘောပေါက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေရဲ့ ထွက်ပေါက်ကို ချက်ချင်း ထောက်ပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာတွေမှာ ဦးကိုနီ ကို မွတ်စလင်ရှေ့နေ၊ ဒါမှမဟုတ် အဲန်အဲလ်ဒီဥပဒေအကြံပေးစသဖြင့် ဖော်ပြကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးကိုနီက အဲဒါတွေထက် အစပေါင်းများစွာပိုမိုနေသူတစ်ဦးအဖြစ် အမှတ်ရနေကြရမယ်။ မြန်မာ့သမုိုင်းမှာ ထင်ရှားတဲ့ ဥပဒေပညာရှင်တွေ၊ သမိုင်းဝင်မွတ်စလင်တွေနဲ့တန်းတူ ဦးကိုနီကိုလည်း အမှတ်ရသင့်ပါတယ်။” (http://www.newmandala.org/personal-tribute-u-ko-ni/)
ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရချိန်မှာ သူဟာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဖေမြင့်ခေါင်းဆောင်တဲ့ ၂၁ ဦးအဖွဲ့နဲ့အတူ နုိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းကြောင့်သွားခဲ့ရတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားခရီးစဉ်ကနေ ပြန်လည်ရောက်ရှိချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာ နုိုင်ငံတော်က ပေးအပ်တဲ့တာဝန်တစ်ရပ်ကို ထမ်းဆောင်အပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အထူးသတိချပ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတီးလ်လစ်တနာရဲ့ အဆို – “၂၁ ဦးထဲမှာမှ သူတစ်ယောက်တည်းလုပ်ကြံခံရတဲ့အပေါ်မှာ သုံးသပ်ဖုို့ အချက်အလက်အပြည့်အစုံမရှိသေးတာကြောင့် အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ မှန်းဆပြီးပဲ ပြောနုိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သေနတ်သမားက ဦးကိုနီလေယာဉ်ကွင်းထဲက ထွက်အလာကို စောင့်နေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီသေနတ်သမားကို စေခုိုင်းတဲ့နောက်ကွယ်ကတစ်ဦးကတော့ လေယာဉ်နဲ့ ပြန်လာမယ်ဆိုတာလည်း သိတယ်၊ ပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုလည်းသိတယ်။ ဒါက အသေအချာကြိုတင်စီမံမှုဆိုတာကို ညွှန်ပြနေတယ်။ ရောရမ်းပြီး သေနတ်နဲ့ ပတ်ရမ်းတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ဒါနဲ့ဘာဆိုဘာမှ မပတ်သက်ဘူး။ ဒီလုပ်ကြံမှုက နုိုင်ငံရေးအရ ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တဲ့ လုပ်ကြံမှုကြီးပဲ။ ဒီအဖြစ်အပျက်နောက်ကွယ်မှာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ အမှန်အကန်ပဲ။ ဒီတိုင်းပြည် (မြန်မာပြည်)မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နုိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှုတွေတုိုင်းမှာ တကုိုယ်တော် သေနတ်သမားဆိုတာ မရှိဘူး၊ ဒါက နုိုင်ငံရေးအရ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူသတ်မှု ၊ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို နုိုင်ငံရေး (လုပ်ကြံမှု) လို့ပဲ သေချာပေါက်ယူဆရမယ်။ နောက်ကွယ်က ဘယ်အုပ်စု ပါဝင်နေသလဲဆိုတာ ကြိုးစားရှာဖွေရမယ်။” (http://www.irrawaddy.com/in-person/bertil-lintner-recalls-slain-nld-lawyer.html)
ဦးကိုနီမှမိမိကိုယ်ကို ဖော်ပြခဲ့ပုံ – “ကျွန်တော်က တားဂတ်ပဲ။ ဘာလို့လဲဆုိုတော့ ကျွန်တော်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေအကြံပေးဖြစ်သလို အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဗဟိုကော်မတီရဲ့ အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နေတယ်။” (http://us10.campaign-archive1.com/?u=f15b18127e37f74088063b773&id=f493aad31e&e=b1f8bbab15)
ဦးကိုနီ၏ ပြောစကားအချို့ –
က . (နုိုင်ငံတော်၏ အတုိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒေနှင့်ပတ်သတ်၍) “ဒီနေရာမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ၅၉(စ)ကို ခေတ္တရုပ်သိမ်းဖို့ အထူးဥပဒေတစ်ရပ်ပြဌာန်းဖို့လိုတယ်။ ဒီအထူးဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က မဲခွဲတဲ့အခါ ရာနှုန်း ၅၁ ရာနှုန်းနဲ့ အတည်ပြုလိုက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ (ရိုက်တာ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၆ – http://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-idUSKCN0VB1ES) ဒီပြောကြားချက်ကတော့ ၂၀၁၆ ဧပြီမှ ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ နုိုင်ငံတော်၏ အတုိုင်ပင်ခံဥပဒေမထွက်ပေါ်မီ၊ အဲန်အဲလ်ဒီပါတီ နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖြစ် စတင်တာဝန်မထမ်းဆောင်မီကတည်းက ပြောကြားထားချက်ဖြစ်ပါတယ်။”
ခ. (မျိုးစောင့်ဥပဒေနှင့်ပတ်သတ်၍) “မျိုးစောင့်ဥပဒေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုသာ အကာအကွယ်ပြုထားတယ်။ တခြားဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရော။ ဥပဒေတစ်ရပ်ဆိုတာ လူတိုင်းကို အကာအကွယ်ပေးရတာမျိုးဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ အခု ဒီမျိုးစောင့်ဥပဒေက တတိုင်းပြည်ထဲမှာ နေတဲ့ ဘာသာခြားအမျိုးသမီးတွေကို လုံးဝလစ်လျူပြုထားတာမျိုးဖြစ်နေပြီ။ ” (ဧရာဝတီ၊ စက်တာဘာ ၂ ၊ ၂၀၁၅)
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရချိန်မတိုင်မီ၊ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ ခြိမ်းခြောက်စာအချို့ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော် ဦးဝီရသူအမည်ခံထားတဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာက မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ထိပါးသူဘယ်သူမဆိုကို ခြိမ်းခြောက်ထားတာမျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရပြီးချိန်မှာလည်း အဲန်အဲလ်ဒီပါတီမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလွဲပြီး ကျန်သူအားလုံးကို လုပ်ကြံသတ်ပြစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာအချို့ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်အလက်တွေဟာ မျက်ကွယ်ပြုထုိုက်တဲ့ အချက်အလက်မျိုးတွေမဟုတ်ပါ။ အမုန်းစကားတွေအပေါ်နုိုင်ငံတော်အစိုးရ ရဲ့ ကြိုးရှည်ရှည်လှန်ထားမှုက ဦးကိုနီရဲ့အသက်ကို စတေးစေသလို ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် မှားယွင်းမယ်မထင်ပါ။
ဆရာဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရတာဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကူးပြောင်းရေးအတွက် အသက်စတေးခံခဲ့ရတာမျိုးသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ပြည်သူအများစုက လတ်တလော ခံယူထားပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးသုံးသပ်သူတွေ ထင်မြင်ထားသလို ဦးကိုနီဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေတ်ပြောင်း ကာလရဲ့ ထာဝရသူရဲကောင်းဖြစ်လာမယ်၊ မြန်မာမွတ်စလင်များရဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံရေးသမုိုင်းမှာ ပါဝင်ပေးဆပ်မှု ထာဝရမှတ်တိုင်သစ်ဖြစ်လာမယ်။ ဒါတွေကို မလိုလားသူများရှိနေသလို ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံတဲ့ လူတစ်စုကလည်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကို လိုလားကြမှာ လုံးဝမဟုတ်ပါ။
ဒီတော့ မလိုမုန်းထားသူတွေက ကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ် သမုိုင်းတွင်ရစ်တော့မယ့် ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုကို ကဖျက်ယဖျက်လုပ်ကြကိန်းပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုကို ဒီကရီ အတုိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ၀ိတ်လျှော့မယ်၊ နိုင်ငံရေးဒါမှမဟုတ် ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် အသတ်ခံရတာမျိုး မဟုတ်ပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြောင့် အသတ်ခံရတာမျိုးဆိုပြီး အကွက်ဆင် ၀ါဒဖြန့်ပါလိမ့်မယ်။
ဦးလှဆွေ(အမတ်ဟောင်း) ၏ ရေးသားချက် – “ကျနော့်အတွေးက ဦးကိုနီ ကို သတ်တာဟာ နိုင်ငံရေး ကြောင့် လို့ သော်၎င်း ၊ ဘာသာရေးကြောင့် လို့ သော်၎င်း ၊ အခြေခံဥပဒေ ပြင်မှာစိုးလို့ ကြောင့် လို့ သော်၎င်း ၊ ရမ်းတုပ် မှန်းတုပ်နေတဲ့လူတွေကို စိတ်ပျက်မိတယ် ။ ဒါကနောက်တော့ စစ်လိုက်ရင် ပေါ်လာမှာဘဲလေ လောစရာမလိုဘူး ၊ ကိုယ့်မှတ်ချက်က သောက်တစ်လွှဲကြီးဖြစ်နေရင် ရှက်ဖွယ် ဘဲ ၊ ဥပမာ ဒီလူက ရာဇဝတ်မှု့နဲ့ထောင်နှစ်ရှည်ကျ ဘဝ ပျက်ခဲ့ရတာဟာ ဦးကိုနီရှေ့နေလိုက်တာကြောင့် ဆိုပြီး အငြိုး နဲ့ နယ်စပ်က သေနပ်ဝယ် စောင့်ဆော်တာဆိုရင် ခြေ/ဥ ကြောင့် တို့ နိုင်ငံရေးကြောင့်တို့ မွတ်ဆလင်ဖြစ်လို့ စတဲ့ မှတ်ချက်တွေဟာ ဟာသ တွေ ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ ။”
အထက်ပါ သုံးသပ်ချက်ကို ဦးလှဆွေက ယနေ့နေ့စွဲနဲ့ သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးလှဆွေရဲ့သုံးသပ်ချက်ကတော့ ကွယ်လွန်သူဦးကိုနီရဲ့ မကွယ်လွန်မီ သမိုင်းကြောင်းအချက်အလက်ပေါ် အခြေမခံဘဲ မိမိကိုယ်ပိုင် ပုဂ္ဂလိကခံစားပြီး ရေးသားထားတာမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးဆူလွယ်တဲ့ မြန်မာပရိသတ် အတွက်တော့ ဦးလှဆွေက ပရိယာယ်သာသာနဲ့ နက်နက်ကလေးနှက်တတ်တာကို သတိချပ်ရပါမယ်။
ဦးကိုနီနဲ့အတူ Laurel ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့တည်ထောင်သူ ဦးခင်မောင်ဌေးရဲ့မှတ်ချက်ကတော့ ဦးလှဆွေရဲ့ သံသယကို တစစီဖဲ့ထုတ်ပြထားပါတယ်။ ဦးခင်မောင်ဌေးက သည်ဗွိုက်စ်ဂျာနယ်မှာ “ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်ခဲ့ကြတာချည်းဆိုတော့ သတ်လောက်အောင်နာကြည်းစရာမရှိဘူးထင်တယ်လေ” ဆိုပြီး လုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အမှု အခင်းတွေ အဆက်အစပ်မရှိနိုင်တဲ့အကြောင်း သုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ (http://thevoicemyanmar.com/article/5755-ukn)
“ဒီအလုပ်တွေမလုပ်နဲ့။ ဆက်လုပ်ရင် သတ်မယ်လို့ သတိပေးတယ်။ သူ (ဦးကိုနီ) ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောတယ်” လို့ ရှေ့နေကြီး ဦးအုန်းလှိုင်ရဲ့အဆိုကို သည်ဗွိုက်စ်က ကိုးကားထားပါသေးတယ်။ (http://thevoicemyanmar.com/article/5755-ukn)
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် သမ္မတအကြံပေး ဦးနေဇင်လတ်၏ ရေးသားချက် – “ဦးကိုနီအနေနဲ့ (၁၉၈၂) နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ (၂ဝဝ၈) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားတာ အတော်များများ သိပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီအချက်တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စဉ်းစားပုံ ကွာခြားခဲ့လို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အလုပ် အင်မတန် များပြားလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဦးကိုနီနဲ့ အရင်ကလောက် ထိတွေ့မှု မရှိခဲ့တော့ပါဘူး၊ OIC နဲ့ အစ္စလာမ်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ဖိအားပေးခြင်းကို ဦးကိုနီက တစ်စုံတစ်ရာ ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလည်း ထွက်လာခဲ့ပြန်တယ်၊ မျှော်မှန်းထား သလိုဖြစ်မလာလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖေ့စ်ဘုတ်က ကြိမ်းဝါးထားတာတွေကိုလည်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။”
ဦးနေဇင်လတ်ဟာ သူ့အမြင်နဲ့ကောက်ချက်ကို အထက်ပါအတုိုင်း ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရအပြီး အလျင်အမြန်ချပြ အသုံးတော်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဦးနေဇင်လတ်ရဲ့ စွပ်စွဲထားတဲ့ ၁၉ ၈၂ နုိုင်ငံသားဥပဒေကို ဦးကိုနီက ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီး အဲဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမြင်ကွဲလွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ ရယ်သွမ်းသွေးဖွယ် အဓမ္မစွပ်စွဲချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကိုနီဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက What is PR? Quintana, Myanmar and 1982 Citizenship Law ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ရေးသားပြီး ၁၉ ၈၂ နုိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေကို ထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရှိထားတဲ့ ရှေ့နေကြီးကိုမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၀၁၆ ဧပြီမှာ နုိုင်ငံတော်၏ အတုိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရာထူးဖန်တီးဖို့ အသုံးချခဲ့လေရော့သလား။ ဒါမှမဟုတ် ဦးနေဇင်လတ်ပြောသလို ဦးကိုနီကပဲ လတ်တလောကောက်ကာငင်ကာနဲ့ သူ့အမြင်တွေပြောင်းပြီး ၁၉၈၂ နုိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေကို လက်ထိလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ခွာပြဲခဲ့လေရော့လား။ အဖြေကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဦးကိုနီရဲ့ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေအပေါ်ထားရှိတဲ့ အမြင်သဘောထားကို သိရှိပြီးမှ မိမိရဲ့နံဘေးမှာ ဥပဒေအတိုင်ပင်လာလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါ။
ဦးနေဇင်လတ်က ဦးကိုနီသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိမ်းဝါးထားတာတွေ လုပ်ထားပါတယ်လို့လည်း စွပ်စွဲထားပြန်ပါသေးတယ်။ ဒါဟာ လုပ်ကြံစွပ်စွဲမှု ၊ အသရေဖျက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကိုနီရဲ့ ၂၀၁၇ နှစ်သစ်ကူးပန်ကြားလွှာမှာ လွှတ်တော်အမတ်မင်းတွေကို ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်မီ ပေးထားတဲ့ကတိတွေဖြည့်ဆီးဖို့နဲ့ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတွေကိုသာ အလေးထားတိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပြီး ဦးနေဇင်လတ်ဆိုသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိမ်းဝါးထားတာမျိုး တစ်လုံးတပါဒမျှ မတွေ့ရပါ။ (ဦးကိုနီ၏ နှစ်သစ်ကူးပန်ကြားလွှာ အပြည့်အစုံ – https://www.facebook.com/koni.lawyer/photos/pcb.1216218001796517/1216217148463269/?type=3&theater) ဦးနေဇင်လတ်အနေနဲ့ လက်ရှိ အခြေခံဥပဒေကို ဘုရားတစ်ဆူဂူတစ်လုံးလို ကိုးကွယ်ထားသော်ငြားလည်း ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကတော့ အဲဒီဥပဒေကို ဘယ်လိုသဘောထားသလဲဆိုတာ သိတာကြောင့် ကျီးလန့်စာများစားရတော့မယ်လို့ အထင်ရောက်သွားခဲ့လေရော့သလားဟုသာ သုံးသပ်ရပါတော့မယ်။
ဦးကိုနီ ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်သူ့အတွက်အလုပ် လုပ်ခဲ့သလဲ
ဦးကိုနီ ၊ ရှေ့နေကြီးဦးကိုနီ ၊ ဆရာကြီးဦးကိုနီ ၊ ဖခင်ကြီးဦးကိုနီ၊ ခင်ပွန်းသည်ကြီးဦးကိုနီ ၊ ဘိုးဘိုးကြီးဦးကိုနီ စသည်စသည်တို့ထက် “ နိုင်ငံတော်၏ အတုိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒေအား ဖန်တီးကြံဆပေးခဲ့သူ” ၊ “ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး နိုင်ငံသားအားလုံးကောင်းစားရေးအတွက် အလုပ်လုပ်ခဲ့သူ” ဆိုတဲ့ အချက် ၂ ခုက သာပြီး ပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဦးကိုနီ ကူညီခဲ့တာဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကောင်းစားရေး အတွက်မဟုတ်ပါ။ မြန်မာလူထုကြီးကောင်းစားရေးအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ဦးကိုနီရဲ့နာရေးဟာကျွန်တော်တို့ လူမှန်းသိတတ်စကတည်းက လူမျိုးဘာသာစုံ နိုင်ငံသား သောင်းချီ မတိုက်တွန်းရဘဲ တက်ခဲ့တဲ့ ကြီးကျယ်တဲ့ ပထမဆုံး နာရေးအခမ်းအနားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာခေတ္တရောက် နိုင်ငံသားတွေ နာရေးလုပ်ရခဲ့တဲ့ နာရေးအခမ်းအနားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မွတ်စလင်ထုကြီးဝန်းရံထားတဲ့ အလယ်မှာမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ၊ ဟိန္ဒူနဲ့ အခြားအခြားသော ဘာသာဝင်တွေစုစည်းပေါင်းရုံးခဲ့ကြတဲ့ နာရေးအခမ်းအနားကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနာရေးအခမ်းအနားကြီးကနေ လူမျိုးဘာသာစုံ နိုင်ငံသားတွေကြားမှာ နိုင်ငံချစ်စိတ်ဆိုတဲ့ ပေါင်းစည်းပေးစေတဲ့ အားတစ်ခုကို အင်းအားအပြည့် သတင်းစကားပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူနေတဲ့သွေးတွေကို ဘီးအဖြစ်လည်ပတ်စေပြီးတော့ ဦးကိုနီနာရေးကပေးတဲ့ သတင်းစကားကို ဆက်လက်သယ်ယူသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုကို နုိုင်ငံရေး ဘာသာရေးလုပ်ကြံခံရမှုအဖြစ်ကနေ အဆင်လျော့ကျသေးသိမ်အောင်သွားအောင်၊ ကျူးလွန်သူတွေ အပြစ်လျော့သွားအောင်၊ နောက်ကွယ်က လက်မည်းကြီးတွေကို မဖော်ထုတ် မဖမ်းဆီးနိုင်ရလေအောင်၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုသမုိုင်းမှာ ဦးကိုနီရဲ့နာမည် မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားအောင်၊ ဦးကိုနီ မကွယ်လွန်မီ သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ အကြိမ်ကြိမ်ဝေမျှခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စ သေးသိမ်ပျောက်ကွယ်သွားအောင်၊ အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ဆောင်နေကြသူအားလုံးကို ရှုတ်ချကြပါစို့၊ မျက်ကွယ်ပြုကြပါစို့၊ ကြဉ်ရှောင်ကြပါစို့။
“တစ်ယောက်ယောက်ကတော့ အမှန်တရားအတွက် ရပ်ရမယ်။ လူဆိုတာ တစ်ခါပဲ သေတယ်။ အဲ့တော့ မှန်တာကိုလုပ်ရင်းနဲ့ပဲ သေသွားမယ်။” ဆရာဦးကိုနီ (၁၉၅၃-၂၀၁၇)
မှန်တာကို လုပ်ရင်းသေသွားသော ဦးကိုနီအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရခြင်းအကြောင်းရင်းမှန်ကို ဖော်ထုတ်နုိုင်ရေးအတွက် – ဦးကိုနီ၏ အထက်ပါပြောစကားအတုိုင်း ရပ်တည်ပြလိုက်ပါ မိတ်ဆွေ။
ရှေ့နေဦးကိုနီအမှု ကွင်းဆက်တရားခံများ မမိမှာ NLD နာယက စိုးရိမ် (Feb 20, 2017)
အောင်ဝင်းခိုင် ဘယ်သူလဲ (Feb 16, 2017)
ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံဖို့ စေခိုင်းသူ တရားခံနောက်တယောက်မှာ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံးသတင်းထုတ်ပြန် (Feb 15, 2017)
ဦးကိုနီ နှင့် ကိုနေဝင်းတို့ အတွက် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပွဲနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းပွဲ ဆစ်ဒနီမှာ ပြုလုပ် (ရုပ်သံ) (Feb 14, 2017)
ကျနော်သိသော ဦးကိုနီ (Feb 13, 2017)
ဦးကိုနီနှင့် ကိုနေဝင်းတို့အတွက် ရည်စူးပြီး ဆုတောင်းပွဲနှင့် နံနက်စာ အလှူကျွေး (Feb 13, 2017)
ဦးကိုနီလုပ်ကြံမှု အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်မှု အားနည်းနေသေး (Feb 13, 2017)
ဦးကိုနီ သူရဲကောင်းလား (Feb 6, 2017)
ဦးကိုနီအမှုမှာ ဒုတိယမြောက်ဖမ်းခံရသူ ဦးအောင်ဝင်းဇော်ဆိုတာဘယ်သူလဲ (Feb 5, 2017)
ဦးကိုနီနှင့် ကိုနေဝင်းတို့ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဆုတောင်းခြင်း အခမ်းအနား မန္တလေးမှာ ပြုလုပ် (Feb 4, 2017)
Tags: UKoNi, ဒန်ငြာရှိန်း